Wargayska Diario Gol Oo Shaaca Ka Qaaday Labada Tababare Ee Uu Neymar Jr Doonayo In Midkood Uu Unai Emery Badalo Iyo PSG Oo Tababare Kale Si Sir Ah U Doonaysa – WWW.Gool24.net
Wargayska Diario Gol Oo Shaaca Ka Qaaday Labada Tababare Ee Uu Neymar Jr Doonayo In Midkood Uu Unai Emery Badalo Iyo PSG Oo Tababare Kale Si Sir Ah U Doonaysa
11/11/2017 Mahamoud Batalaale
Xidiga xulka qaranka Brazil ee Neymar Jr ayaa u muuqda mid galaafan doona shaqada macalinka kooxdiisa ee Unai Emery kadib markii uu xaalado khilaaf ka soo abuuray isla markaana ay soo baxeen warar badan oo sheegaya in aanu ku faraxsanayn la shaqaynta Unai Emery laakiin wargayska Diario Gol oo Spain ka soo baxa ayaa shaaciyay labada tababare ee uu Neymar doonayo in midkood uu PSG la wareego.
Laakiin sidoo kale wargayska Diario Gol ayaa sheegay in uu jiro tababare kale oo ay maamulka PSG si sir ah u doonayaan in uu mustaqbalka kooxdooda la wareego. Wargayska Diario Gol ayaa sheegay in Neymar Jr uu doonayo in Jose Mourinho ama Antonio Conte midkood uu badalo Unai Emery kaas oo aanu ku qancin qaabka tababarkiisa.
Laakiin wargayska Diario Gol ayaa intaas raaciyay in maamulka kooxda PSG ay si sir ah u doonayaan in tababaraha kooxda Atletico Madrid ee Diego Simeine uu noqdo macalinka ay mustaqbalka kooxdooda ku aamini doonaan. Laakiin wararka ayaa sheegaya in PSG ay shaqada ka caydhin karto Emery si ay u raali galiso xidiga aduunka ugu qaalisan ee Neymar Jr.
Neymar Jr ayaa ka war qaba in kooxdiisa PSG si xoogan loola xidhiidhinayo Jose Mourinho kaas oo uu aaminsan yahay in uu si fiican ula shaqayn karo laakiin sidoo kale xidiga ree Brazil ayaa jeclaan lahaa in Antonio Conte uu isna kula shaqeeyo PSG sida lagu sheegay Diario Gol.
PSG ayaa xaalad adag kala kulmaysa sidii ay Neymar Jr ugu ilaalin lahayd farxad uu kooxdeeda ku joogo iyada oo haddaba ay soo baxeen warar sheegaya in uu ka shalaynayo go’aankii uu Barcelona kaga soo baxay waxaana jira deganaansho la’aan uu Neymar wali ku dareemyo kooxda PSG.
Jose Mourinho ayaa ka mid ah tababarayaasha ugu cad cad ee Unai Emery badali kara haddii shaqada laga caydhiyo inkasta oo uu wali doonayo sidii uu xiisaha PSg ugaga faa’iidaysan lahaa in uu heshiis qaali ah kaga helo Man United oo aan wali doonayn in macalinka ree Portugal ay qandaas cusub ka saxiixato.